Mpanohitra : Tsisy raisina ny TIM? » lay andriamialy
- parodie rajaonarimampianina sy ravalomanana
Accueil Actus Mpanohitra : Tsisy raisina ny TIM?
Actus malgachitudes theories
Ny antoko TIM izay iray amin’ireo antoko lehibe indrindra eto Madagasikara dia mifamatotra amin’ny anaran’ny mpanorina azy dia ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Samy mahafantatra ny rehetra fa ny fanohanany ny Dr Robinson no nahatafita an’ity farany ho amin’ny fihodinana faharoa tamin’ny fifidianana farany teo. Ny fifidianana solombavambahoaka dia naneho ihany koa fa tsy azo atao tsinontsinona ny TIM eo amin’ny sehatra politika eto an-toerana. Raha mbola eo anefa ny fahafantarana fa ny TIM dia i Marc Ravalomanana ihany dia mbola ho sarotra ny hihevitra fa ireo izay nanongana azy, ireo izay nifofo ny ainy sy te hampiditra azy an-tranomaizina ary ireo izay mety manana antony hafa koa dia hamela ny TIM hanana izany toeran’ny mpitarika ny mpanohitra izany.
Raha ny ara-tantara sy ny lozika indray dia tokony ho nazava fa i Dr Robinson izay resin’ny Filoha Rajaonarimampianina tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo no hitarika ny fanoherana eto Madagasikara. Dr Robinson sy ny rafitra AVANA peta-toko nanohina azy anefa dia hita fa tsy hahazaka an’izany andraikitra izany. Aiza moa izy ireo ankehitriny na dia nahazo 30% mihoatra aza tamin’ny fihodinana voalohany?
Ny mahatsikaiky amin’izay izao satria ny bilaogy Lay andriamialy dia mbola ny ny fitsikiana no omeny lanja kokoa eo amin’ny fiainana. Ireo vonimboasary, dia ny TGV dia nanohana tanteraka ny filoha ankehitriny tamin’ny fifidianana. Naharesy ve ity farany raha tsy teo ny TGV? na tamin’ny fomba inona na tamin’ny fomba inona dia ny TGV izay teo amin’ny fitondrana dia afaka nanome antoka ny fandresen’izay notohanany. Ankehitriny anefa ny TGV dia tsy mifakahazo amin’ny HVM, rafitra manohana ny Filoha Rajaonarimampianina ka dia mametraka ny tenany ho anisan’ireo mety ho mpanohitra ihany koa.
Dia ho gaga ve ianareo raha toa ka ny HVM no hitondra ary ny TGV no hitarika ny mpanohitra?
Raha izaho mantsy tsy ho gaga amin’izany aho. Efa resy ny TIM ary mbola ho resy tanteraka raha tsy hoe angaha manana paik’ady mbola avo lenta kokoa tsy takatry ny saina keliko izy ireo hamadihana ny rasa.
Be ny resaka mandeha, ny RFI dia efa manolotra anarana 2 sahady mba hihazona ny toeran’ny filohan’ny mpanohitra. Miaiky koa anefa izy ireo fa mbola tsy mifanara-tsaina mihitsy ny mpanohitra amin’izao fotoana izao. Eo ankilan’izany dia misy ny fifanatonana eo amin’ny Ravalomanana sy Rajaonarimampianina izay tsy fantatra hatramin’izao ny fifanarahana natao raha nisy izany.
« Eo ‘sika rehetra mahita izy » fa fomba fijerin’olon-tsotra ny ahy. Mahay politika nareo ry zalahy a!
Article précédent Madagasikara : Mitohy ny fifandirana
Article suivant Maratra i Dago
Je me moques des automobilistes que vous êtes. C’est parce qu’ici à Tana, les …